Calaamada cudurka/cudurka - 1177
Calool xanuunMagsjuka - somaliska
Calool xanuunku waa xanuun caadi ah oo si degdeg ah iskaga taga. Waxa laga yaabaa inaad yalaalugooto, matagto oo aad shuban yeelato. Waxa muhiim ah in cabitaan ka badan intii hore la cabo marka calooshu ku xanuuneyso.
Fayruska RS-ka ee carruurtaRS-virus hos barn - somaliska
Infegshanada fayruska RS-ka ayaa qaar caadiya ah. Dadka badankoodu waxay u xanuunsadaan sida hargabka oo kale. Carruurta qaarkood ayaa aad u jiran karta iyagoo daryeel cisbitaal u baahan kara.
HargabInfluensa - somaliska
Hargabku waa cudur uu fayrus keeno. Waxaad yeelan kartaa qandho iyo xanuun madaxa, jidhka iyo cunaha. Hargabka waxa caadi ahaan la yeeshaa laga bilaabo diisembar illaa abriil.
Qandhada/xummadda carruurtaFeber hos barn - somaliska
Injirta timaha gashaLöss i håret - somaliska
IsnidaamisSkabb - somaliska
Qaniinyada shilintaBiten av fästing - somaliska